သင့်ရဲ့စာသင်ခန်းထဲမှာဗီယက်နမ်ကျောင်းသားများသှနျသငျဖို့ကိုဘယ်လို | USAHello
ကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးရုံး UNHCR / K မှဓာတ်ပုံ. မက်ကင်ဆေး.
ဗီယက်နမ်, အင်္ဂလိပ်, ပြင်သစ်, တရုတ်, ခမာ, မွန်ခမာနှင့် Malayo-Polynesian.
မူလတန်းကျောင်းမသင်မနေရသည်နှင့်အဘို့ကြာရှည်ခံ5အနှစ် (အသက်အရွယ်မရွေး6-11). အလယ်တန်းပညာရေးမသင်မနေရမဟုတ်ပါ. အလယ်တန်းကျောင်းနှစ်ဦးကိုအပုဒ်ရှိပါတယ်: သဘာဝအလျောက်သို့မဟုတ်လူမှုရေးသိပ္ပံ. ကျောင်းသားများအနေနဲ့ဝင်ပေါက် ယူ. စာမေးပွဲထွက်ခွာရမယ်. အဆိုပါကျောင်းတွင်တစ်နှစ်မေလတိုင်အောင်, စက်တင်ဘာလကနေကြာ, စနေနေ့မှတနင်္လာ. မူလတန်းကျောင်းသင်ရိုးညွှန်းတမ်းထိုကဲ့သို့သောဗီယက်နမ်ဘာသာစကားအဖြစ်ဘာသာရပ်များပါဝငျ, သင်္ချာ, သဘာဝနှင့်လူ့အဖွဲ့အစည်း, အနုပညာနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပညာရေး. ကငျြ့တရားမူလတန်းကျောင်းများတွင်ကျောင်းသားများကိုရန်သွန်သင်နေသည်. ပိုမိုမြင့်မားသောအတန်းထဲတွင်, နှင့်အလယ်တန်းပညာရေးအတွက်, ကျောင်းသားများကိုတစ်ဦးနိုင်ငံခြားဘာသာစကားမှမိတ်ဆက်ကြသည် (များသောအားဖြင့်အင်္ဂလိပ်, သို့သော်တစ်ခါတစ်ရံ Chinese သို့မဟုတ်ပြင်သစ်), သမိုင်း, သဘာဝကသိပ္ပံ, နည်းပညာ, ဂီတနှင့်ပထဝီ.
ဗီယက်နမ်ကနေဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာတရုတ်ထံမှလူတစ်ဦးပင်သောင်းပြောင်းထွေလာရောနှောအုပ်စုတစ်စုတို့ပါဝင်သည်, Cham, Montagnard, နှင့်ခမာလူမျိုးစုနောက်ခံ. ပညာပေးသင်းဖွဲ့နှင့်စွဲဟာ U.S ဖို့နေရာပြောင်းရွှေ့ပြီးနောက်ဆက်လက်ကြောင်းသတိပြုမိဖြစ်သင့်.
အများစုမှာ Montagnard (ကုန်း) ကလေးတွေနည်းနည်းတရားဝင်ပညာရေးနှင့်အနည်းငယ်သာအင်္ဂလိပ်နှင့်အတူရောက်လာ (ရှိလျှင်). သူတို့ဟာမကြာခဏပြုမူသို့မဟုတ်ဝတ်စားဆင်ယင်ဖို့ဘယ်လိုအတူကျွမ်းတဝင်မရှိသောဖြစ်ကြောင်းနှင့်ကျောင်းထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများကင်းမဲ့စေခြင်းငှါ. ဗီယက်နမ်နိုင်ငံတွင်ကျောင်းတွင်တက်ရောက်ခဲ့ပြီးသူများသည်အစားဝေဖန်စဉ်းစားတွေးခေါ်နဲ့ပြဿနာဖြေရှင်း၏လွတ်ကျက်အာရုံစိုက်နေတဲ့အလွန်အမင်းအာဏာရှင်လူတန်းစားဖွဲ့စည်းပုံမျှော်လင့်ထား. အားလုံးနီးပါးကျောင်းသားများကိုလူမှုရေးကျွမ်းကျင်မှုကိုကူညီကျူရှင်နှင့်အစီအစဉ်များကနေအကျိုးရှိမည်ဟု.
ပညာရေးမြင့်မားတဲ့ဗီယက်နမ်ယဉ်ကျေးမှုထဲမှာတန်ဖိုး, နှင့်ကလေးများအားဖြင့်မှီသိကျွမ်းခြင်းပညာတစ်ခုလုံးကိုမိသားစုအပေါ်တစ်ဦးရောင်ပြန်ဟပ်မှုအဖြစ်ရှုမြင်နေသည်. သင်ယူမှုအပေါ်ထားရှိမြင့်တန်ဖိုးကိုအဆင့်မြင့်ပညာရေးကိုလိုက်ရန်ငယ်ရွယ်ဗီယက်နမ်အမေရိကန်များ၏ကြီးမားသောအချိုးအစားကိုဦးဆောင်. တွင် 2012, သို့သော်, ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 68% ဗီယက်နမ်ဝင်လာသူ (အသက်အရွယ်မရွေး5နှင့်ကျော်) Limited ကအင်္ဂလိပ်စာကျွမ်းကျင်မှုခဲ့ကြသည် (LEP). အိမ်မှာသာအင်္ဂလိပ်စကားအဘယ်သူသည်ဗီယက်နမ်ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူများ၏အချိုးအစားခဲ့သည် 7%.
Montagnard မိဘများအမေရိကန်အများပြည်သူကျောင်းများနှင့်မိဘပါဝင်ပတ်သက်မှု၏အခန်းကဏ္ဍကိုနှင့်အတူကျွမ်းတဝင်မရှိသောများမှာ. မိဘများအိမ်စာနှင့်အတူ၎င်းတို့၏ကလေးများကိုကူညီနိုင်ခြင်းသို့မဟုတ်သင့်လျော်သောအပြုအမူဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့. ထုံးစံအတိုင်း, ကလေးများသင်ရိုးညွှန်းတမ်းများလှုပ်ရှားမှုများမဟုတ်သလိုပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန်အားပေးမှုများအတွက်မပိုက်ဆံလက်ခံရရှိ. ကျောင်းစာအုပ်ပုဂ္ဂိုလ်များမိဘများသတိပေးချက်များတုံ့ပြန်မတိုင်ကြား, အိမ်မှာသူတို့သားသမီးကြီးကြပ်ပါဘူး, နှင့်၎င်းတို့၏ကလေးငယ်များသည်ကျောင်းနေမကောင်းလာရန်ခွင့်ပြု. မိဘများအင်္ဂလိပ်စကားမပြောကြပါလျှင်သာမန်ဆယ်ကျော်သက်ပြဿနာများကိုပုံကြီးချဲ့များမှာ, စည်းကမ်း၏အမေရိကန်စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်နည်းလမ်းများနားမလည်ဘူး (ကလေးကအလွဲသုံးစားမှုတွေအကြောင်းအများကြီးရှုပ်ထွေးလည်းမရှိ), နှင့်ချိန်းတွေ့၏လက်မခံလို့. အမြိုးသားအကိုပိုမိုလျင်မြန်စွာ၎င်းတို့၏မိဘများထက်အင်္ဂလိပ်စာသင်ယူသူတို့မိသားစုများအတွက်ယဉ်ကျေးမှုပွဲစားများနှင့်စကားပြန်ဖြစ်လာသည့်အခါမျိုးဆက်တင်းမာမှုများပိုမိုဆိုးရွားလျက်ရှိသည်.
အလွန်အမင်းစိတ်အားထက်သန်ပေါ်လာဖို့မသကဲ့သို့ဗီယက်နမ်မကြာခဏနှောင်းပိုင်းတွင်ရောက်ရှိလာပါလိမ့်မယ်. သို့သော်, သူတို့ပရော်ဖက်ရှင်နယ် setting တွင်ချိန်းဖို့တိများမှာ. တရားဝင်လူတွေဖြေရှင်းရန်, မစ္စတာကိုသုံးပါ. သို့မဟုတ်မစ္စ. သို့မဟုတ်တစ်ခေါင်းစဉ်ပေါင်း ပဌမ နာမတျောကို. လူအတော်များများဟာအနည်းငယ်နြတေဲ့အားဖြင့်နှုတ်ဆက်. လေးစားမှုကိုပြသ, တစ်ဦးထက်သာလွန်သို့မဟုတ်အကြီးအကဲတစ်ဦးမှကိုယ်ဦးခေါင်းကိုညွှတ်. သက်တံ့၏အတိမ်အနက်ကိုအချက်တစ်ခုမဟုတ်ပါဘူး. အများအားဖြင့်, အကွီးအကဲမြားသို့မဟုတ်မြင့်မားသောအဆင့်ကလူ (မိသားစုဦးခေါင်းကို) ပထမဦးဆုံးအရင်းရင်းနှီးနှီးနှုတ်ဆက်နေကြတယ်.
အလွယ်တကူနဲ့မကြာခဏအတော်များများဗီယက်နမ်အပြုံး, မသက်ဆိုင်နောက်ခံစိတ်လှုပ်ရှားမှု၏, ဒါကြောင့်တစ်ဦးအပြုံးအလိုအလြောကျပျော်ရွှင်မှုကိုသို့မဟုတ်သဘောတူညီချက်အဖြစ်အနက်မရနိုငျ. ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်မှုသို့မဟုတ်မလေးစားတဲ့ရှောင်ရှားရန်, အများကြီးသဘောမတူ vocalize မည်မဟုတ်. ဗီယက်နမ်မကြာခဏအခြားယဉ်ကျေးမှုမသင့်လျော်ကိုရှာဖွေစေခြင်းငှါအခြေအနေများတွင်ရယ်မော. ဤသည်မှာရယ်မောခြင်းလှောင်ပြောင်အဖြစ်ရည်ရွယ်သည်မဟုတ်. တစ်စုံတစ်ဦးက profusely မကြာခဏမြှောက်အဖြစ်မှတ်ကိုခြီးမှမျး, တခါတရံပင်မထီမဲ့မြင်ပြုတတ်. လူအများစုဟာအလွန်ကျိုးနွံများမှာနှင့်ချီးမွမ်းခြင်းနေမှုကိုအာရုံလွှဲ.
ဂတိတော် Breaking လူမှုရေးမျှော်လင့်နေတဲ့လေးနက်ချိုးဖောက်မှုရှိနိုင်ပါသည်. re-တည်ထောင်ရန်တစ်ဦးပျောက်ဆုံးယုံကြည်မှုရန်အလွန်ခက်ခဲသည်.
အလွန်အကျွံအမူအရာနဲ့အသံကျယ်သေံပြောဆိုခြင်းရိုင်းစိုင်းစဉ်းစားသည်, အမြိုးသမီးမြားအားဖြင့်ပြုသောအမှုအထူးသဖြင့်လာသောအခါ. ဖြောင့်မတ်အနေအထားအတွက်လက်သို့မဟုတ်လက်ညှိုးနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဆင့်ခေါ်သာတိရိစ္ဆာန်များသို့မဟုတ်ယုတ်ညံ့လူတို့အဘို့သိုထားခြင်းဖြစ်သည်. နှစ်ခုညီမျှပြည်သူများအကြားကဒေါသဖြစ်တယ်. ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးကိုခေါ်သော, လက်ချောင်းကိုဆင်း facing နှင့်အတူတစ်ခုလုံးကိုလက်တစ်ခုတည်းသောသင့်လျော်သောလက်အချက်ပြဖြစ်ပါသည်.
ဗီယက်နမ် Kinh အပါအဝင်တိုင်းရင်းသားအုပ်စုများအမျိုးမျိုးရှိပါတယ် (ဗီယက်), လက်, ထိုင်း, Muong အဘိဓါန်, ခမာ, မျှော်လင့်ချက်, ရသောအခါ, နှင့်အခြားအုပ်စုများ. ယဉ်ကျေးမှုအဆင့်အတန်းကိုပိုမိုစိုးရိမ်ပူပန်ဖြစ်ပါသည် (အသက်အရွယ်နှင့်ပညာရေးနှင့်အတူရရှိခဲ့) စည်းစိမ်ဥစ္စာနှင့်အတူထက်. အများကြီးအလေးပေး Collection အပေါ်ဖြစ်ပါသည်, အရာမိသားစုဝင်များ၏သက်သာချောင်ချိရေးအတှကျပေးကာတာဝန်လည်းပါဝင်သည်. မိသားစုဝင်များအုပ်စု၏ကောငျးကြိုးအတှကျအလုပျလုပျနှင့်ပြုမူရန်မျှော်လင့်နေကြသည်. မိသားစုများလူသိရှင်ကြားနေမကောင်းစှာနထေိုငျသူသည်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးရှုတ်ချမည်အကြောင်း; သူတို့သည်လည်းမိသားစုအောင်မြင်မှုများစီရင်စေခြင်းငှါ. တစ်ခုချင်းစီအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦး designated kinship သက်တမ်းရှိပါတယ်, အချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်ဖြေရှင်းတဲ့အခါမှာဤအသုံးပြုကြသည်.
ဘိုးဘေးတို့ပုံမှန်အားဖြင့်အိမ်အပြင်ဘက်အလုပ်လုပ်ခဲ့နှင့်မိခင်များပြည်တွင်းတာဝန်များကိုတာဝန်ခံများမှာ. ဗီယက်နမ်ယဉ်ကျေးမှုတစ်ခုကြီးစိုးသည့်စနစ်အပေါ်အခြေခံသည်, ခင်ပွန်းအဓိပ္ပာယ်မိသားစု၏ဦးခေါင်းအဖြစ်နှင့်ငွေကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်မိသားစုကိုထောက်ပံ့တာဝန်ခံပြုမူ. ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်မှုနှင့်အနောက်တိုင်းသြဇာလွှမ်းမိုးမှုကြောင့်, ရိုးရာကျားမအခန်းကဏ္ဍပြောင်းလဲလျက်ရှိသည်.
သငျသညျမှတ်ချက်များသို့မဟုတ်နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များကိုသို့မဟုတ်စိတ်ကူးများရှိပါကဗီယက်နမ်ကျောင်းသားများကိုဆုံးမဩဝါဒ ပေး. အပေါ်ဝေမျှဖို့, အီးမေးလ်ပို့ပါ: info@usahello.org.
သင်ဤဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပြီး print ထုတ်နိုင်ပါတယ် ဗီယက်နမ်သင်ယူသူပရိုဖိုင်းကို PDF အဖြစ်နှင့်သင့်စာသင်ခန်းထဲမှာတစ်ဦးအရင်းအမြစ်အဖြစ်စောင့်ရှောက်.